ब्रिटिश गोर्खामा अब महिला पनि भर्ती हुने ! - Naya Pusta
ब्रिटिश गोर्खामा अब महिला पनि भर्ती हुने !
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७५ असार ३२, सोमबार २२:२२
काठमाडौं । ब्रिटिश सेनाले गोर्खा ब्रिगेडमा सन् २०२० सम्ममा महिलाहरूलाई पनि भर्ती गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपालीहरू दुई सय वर्षभन्दा अघिदेखि ब्रिटिश गोर्खा फौजमा सहभागी हुँदै आएका छन्।
यो अवधिमा महिलाहरूलाई पनि लडाकु सैन्यका रूपमा भर्ती गर्न लागिएको यो पहिलो अवसर भएको बताइन्छ। भर्तीका लागि उनीहरूका निम्ति छुट्टै छनोट प्रक्रिया बनाइएको छैन।
त्यसैले महिलाहरूले पनि पुरुषहरूले जस्तै नै कठिन शारीरिक परीक्षाहरूमा उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ। बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएको लिखित जवाफमा ब्रिटेनका रक्षामन्त्री ग्याभिन विलियम्सनले महिलाहरूले सो सर्वोत्कृष्ट ब्रिगेडमा सेवा गर्ने अवसर पाउनु उचित भएको बताएका छन्।
ब्रिटिश सेनाका एकजना वरिष्ठ अधिकारी एवम् गोर्खा ब्रिगेडका प्रमुख लेफ्टिनन्ट जनरल निक पोप, सीबीईले यो निर्णयले ब्रिटिश सेनाको खुलापन र विविधता प्रतविम्बित गर्ने बताए। बीबीसी नेपाली सेवालाई उपलब्ध उनको टिप्पणीअनुसार यो नीति महिलाहरूलाई पनि स्थलगत लडाइँमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने अवसर दिने ब्रिटिश सरकारको निर्णय अनुरूप नै छ।
ब्रिगेड अफ गुर्खाज सन् २०२० सम्ममा महिला आवेदकहरूका लागि पनि खुल्ला हुनेछ, उनले भने। छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुन आवेदकको तौल ५० केजी र उचाइ १५८ सेन्टिमिटर (पाँच फुट एक इन्च) बढी हुनुपर्छ।
उनीहरू आठ चोटि (अन्डर्आर्म हीभ) गर्न सक्षम पनि हुनुपर्छ। छनोटका लागि आवेदक महिलाहरूले २५ केजी बालुवा डोकोमा बोकेर पाँच किलोमिटर उकालो दौडिनुपर्नेछ। भर्ना प्रक्रिया पोखरामा हुनेछ। छानिएका आवेदकहरूले ब्रिटेनको नर्थ योर्कशरस्थित क्याट्रिकमा १० हप्ता तालिम लिनेछन्।-बीबीसी
यो पनि पढ्नुहोस् : एनआरएन युकेको उपाध्यक्षमा एलबिजेड नै किन ?, यस्ता छन् एजेण्डाहरु
भारतका लागि निलकण्ठ उप्रेती राजदूतमा सिफारिश
काँग्रेस सभापति देउवाले दिए प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस्तो चेतावनी !
पढ्न अस्ट्रेलिया गएका नेपाली युवक लुगा राख्ने दराजभित्र मृत फेला
दुर्घटनामा परी मलेशियामा २ नेपालीको मृत्यु
कुवेतको एक बिल्डिङमा भीषण आगलागी हुँदा ३ जना नेपालीको मृत्यु